ကျွန်ုပ်၏ Nintendo သို့စာရင်း ပေး၍ LEGO VIP အမှတ် ၂၅၀ အခမဲ့ရယူပါ
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 390 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego စတိုး, Lego စတိုးဆိုင်များ, Lego စူပါမာရီယို, Lego VIP, LEGO.com, Luigi, ကျွန်ုပ်၏ nintendo, Nintendo, စူပါမာရီယို, အဆိုပါ LEGO Group, VIP, vip အချက်များ, VIP ဆုပေးစင်တာ
ကျွန်ုပ်၏ Nintendo အဖွဲ့ဝင်များသည်လောလောဆယ် ၂၅၀ အခမဲ့တောင်းဆိုနိုင်သည် Lego p အသစ်မှတဆင့် VIP အမှတ်များartအကြား nership Lego အုပ်စုနှင့် Nintendo ၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်များ
အခမဲ့အမှတ်များရယူရန် - အနာဂတ် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်သီးသန့်ဆုလာဘ်များတွင်သုံးနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များ - သင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာကျွန်ုပ်၏ Nintendo အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပြီးဆုလာဘ်ကိုရွေးနှုတ်ပါ ဒီနေရာမှာကိုနှိပ်ခြင်းမရ။ ထို့နောက်သင်ရိုက်ထည့်ရမည့်ကုဒ်ကိုသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် LEGO.com.
Nintendo ၏အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့်ဆုလာဘ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ရနိုင်သောရွှေသို့မဟုတ်ပလက်တီနမ်အမှတ်များဖြစ်သည် လောလောဆယ်အခမဲ့ ၀ င်ငွေရှိသည် ယင်းမှတဆင့် VIP ဆုပေးစင်တာ (synergy!) သို့ရာတွင် ၂၅၀ အခမဲ့ဖြစ်သည် Lego မည်သည့်အရာမဆိုသုညမှတ်အတွက် VIP အမှတ်များရနိုင်သည်။
၎င်းသည်စိတ် ၀ င်စားစရာပမာဏမဟုတ်ပါ၊ ရမှတ် ၂၅၀ သည်အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်ပေါင် ၁.၅၆ နှင့်ညီမျှသောဆုလာဘ်ဘောက်ချာများ (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုလာဘ်များအတွက်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ Lego ဥပမာ Luigi သော့ချိတ်။ ထို့အပြင်အခမဲ့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည်လည်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်လိုသည် Lego အဖွဲ့၏သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်မည်သို့ပင်ဖော်ပြခဲ့ပါစေ။ မင်းတစ်နည်းနည်းနဲ့ VIP အဖွဲ့ဝင်မဖြစ်သေးရင်ဒီကိုသွားပါ LEGO.com နှင့်စာရင်းသွင်းပါ၊ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ၀ ယ်ယူတိုင်းတွင်အမှတ်များရလိမ့်မည်၊ သင်တက်ရောက်ရန်အတွက်အပြာရောင် VIP keyring တစ်ခုအခမဲ့ရရှိလိမ့်မည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကျန်တဲ့အရာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ Lego စူပါမာရီယို လက်ရှိတွင်ဆုများအနှံ့ရနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Nintendo ၏အွန်လိုင်းစတိုး ဟိ Lego အဖွဲ့တစ်ခုလည်းလည်ပတ်နေသည် တင်ရေး သီးသန့်သော့ချိတ်နှစ်ခုအပါအ ၀ င်ဘန်ပါ Mario ဆုနှင့်အတူ
← LEGO 71031 ကိုအနီးကပ်ကြည့်ပါ Marvel Studios 'Loki minifigure
p ကိုသင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သေးသည်art of classic Lego Marvel Spider-Man ယနေ့တွင် →